စိတ်ကူးပျော်ရာ: Hard Skills နဲ. Soft Skills !!!
အလုပ်ရှင်တွေက ၀န်ထမ်းတစ်ယောက်ခန်.အပ်ဖို. Hard Skills နဲ. Soft Skills တွေကို ဘယ်လိုအကဲခတ်လေ့လာလဲ ???
Hard Skills ဆိုတာကတော့ Adobe Photoshop, Microsoft Office, C++ အစရှိတာတွေနဲ.ပတ်သက်တဲ့စွမ်းရည်တွေဖြစ်ပြီး
Soft Skills ဆိုတာကတော့ ပေါင်းသင်းဆက်ဆံရေး၊ အသင်းအဖွဲ.နဲ.အတူတူဆောင်ရွက်နိုင်မှု၊ ပြသနာတွေကိုအလျင်အမြန်ဖြေရှင်းနိုင်တဲ့ဖြတ်ထိုးဥာဏ်၊ ဦးဆောင်လမ်းပြနိုင်မှုစတဲ့စွမ်းရည်တွေကိုခေါ်တာပါ။
များသောအားဖြင့်လုပ်ငန်းတွေမှာ HR တွေက Hard Skills 44% နဲ. Soft Skills 56 % တန်းဝင်မယ့် အလုပ်လျှောက်သူတွေကိုအဓိကထား ဦးစားပေးပေမယ့် အလုပ်ရှာနေသူတွေကတော့ Soft Skills ကသာအဓိကကျပြီးအသုံးဝင်တယ်လို. ထင်လေ့ရှိကြပါတယ်။
HR တွေအဓိကထားကြည့်တဲ့ Soft Skills တွေကတော့
Soft Skills တွေကိုအဓိကထားကြည့်ပြီးအလုပ်ခန်.အပ်တာမျိုးရှိပေမယ့် Hard Skills တွေကလည်း သင့်အတွက်အရေးကြီးတဲ့အခန်းကဏ္ဍက ပါဝင်နေပြန်ပါတယ်။
အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေထဲက 69% ကိုအလုပ်က HR တွေကို Soft Skills အရင်လေ့လာဆန်းစစ်ပြီးမှ Hard Skills ကိုမေးမြန်းပါတယ်။ ဒါပေမယ့်လည်း အလုပ်ရှင်တွေဘက်ကကြည့်တော့ အလုပ်ခန်.ရာထူးနေရာချဖို. အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေရဲ. အရည်အချင်းတွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ 75% က အရည်အချင်းမပြည့်မှီတာမျိုးရှိနေတာကိုလည်းတွေ.ရပါတယ်။ 30% လောက်ပဲ အလုပ်နေရာနဲ. အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်နေပါတယ်။
အလုပ်လာလျှောက်တဲ့သူတွေထဲက 35% လောက်က သူတို.ကိုအလုပ်မခန်.တာ Interview ကောင်းကောင်းမဖြေနိုင်ခဲ့လို.လို. ထင်နေပြီး 40% လောက်ကတော့ HR တွေနဲ. သဘောထားကွဲလွဲမှုတွေရှိနေလို.လို. ထင်နေပါတယ်။
73% လောက်ကတော့ အလုပ်လျှောက်စာရေးသားတာ အဆင်ပြေကောင်းအမွန်မှုမရှိလို. အလုပ်မခန်.ဖြစ်တာဖြစ်ပြိး 62% လောက်ကကျတော့ အလုပ်လျှောက်စာမှာ အဓိကကျတဲ့ အချက်အလက်အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသားဖော်ပြနိုင်လို. အလုပ်ခန်.ခံရတာမျိုးဖြစ်ပါတယ်။
Posted by စိတ်ကူးပျော်ရာ အချိန် 3/26/2015 07:39:00 AM